Ra’iisulwasaare Kheyre “Soo Dhaweyn Mayno In Garab Saddexaad oo Ajnabi Ah Uu na Dhex-dhexaadiyo” (Daawo) – Idil News
Posted By: Somali Desk September 17, 2018
MUQDISHO(IDIL NEWS)-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay magaalada Muqdisho uga qeyb galay munaasabad looga hadlayay barnaamijka Isxilqaan ayaa wuxuu sheegay in aysan aheyn wax la aqbali karo in magaalada Muqdisho la yiraahdo laguma shiri karo oo amni ma ahan.
“Waxaanan soo dhaweyneyn in la yiraahdo magaalo madaxda dalka laguma shiri karo oo amni ma ahan, magaraneyno cida loogu daneynayo, laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo cid walba oo sidaas tiraahday inay tahay astaanta qaranka, inay tahay magaalo ay wada dhisteen dhammaan shacabka Soomaaliyeed”. Ayuu yiri Khayre.
Khayre ayaa sidoo kale sheegay in laga gudbay xilligii Soomaalida dhexdeeda loo wici jiray shisheeye xalintooda, islamarkaana aysan aheyn wax ay ogolaan karaan madaxda dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa markale yiri “Sidoo kale waxaanan soo dhaweyneyn hana soo kala dhexgalo garab Saddexaad oo ajnabi ah, garab Saddexaad waa dhaqankii aan horey u soo baranay, kaasi waala soo dhaafay, xaalada dowladnimada ay ku sugan tahay maanta waxa ay mareysaa shacabka Soomaliyeed meel walba oo ay joogaan inay dareemayaan inay dib u soo laabatay sharaftooda”.
Khayre ayaa wuxuu kaloo sheegay kuwa doonaya in dalka loo gacan geliyo shisheeye inay yihiin kuwa dhabar jabinaya guusha weyn ee u soo hooyatay qaranka, isaga oo sidoo kale tilmaamay in dowladda ay hada ku hawlan tahay inay heshiisiiso dalalka gobolka, aysana dib u laaban doonin.